नसोचेको संसार - Kantipath.com
शान्त शितल चकमन्न अध्यारो रातमा मेरा आँखाहरुले भने पर क्षितिजसम्म टन्टलापुर घाम देखिरहेछन् । त्यहि क्षितिजको उज्यालो घाम पछ्याउँदै मेरा पाईलाहरु निरन्तर अगाडी बडिरहेछन् । घामको चहकिलो उज्यालोमा मेरा आँखा भने हिमालको दृष्यमा पुगेर टक्क अडिए । आँखाले हिजोसम्म सेतो रंगमा स्पर्श गरेको मेरो हिमाल एक्कासी कालो रंग पोतिएको देखियो । एकैछिन् सोच शुन्य भयो । फेरि मनमनै सोचे घामले हिमाल डढायो सायद ।
फेरि मन उहि रफ्तारमा दौडियो । हिमालबाट मन आफैंमा आएर अड्कियो । सोचे हिमाल जलाउँने घामले मलाई किन जलाउँन सकेन् ? मनभरी यस्तै कौतुहलता उमारेर हिमलको आकार हातले मुसारे । हिमाल त केवल नाम मात्रैको रहेछ । मेरो हिमालको विशेषता काला पत्थरमा पुगेर समाप्त हुनै लागेको रहेछ । अस्तित्व विहिन बन्दै गएको हिमालको मायाले पग्लेको मनले एकै छिनमा पहाड हुँदै तराईको बाटो समात्यो । मेरो मनको बेग संसार खत्तम गर्न सक्ने क्षेप्याश्त्र भन्दा निक्कै बेग थियो । त्यहि बेगको बाटो समातेर म कति छिट्टै तराईको फाँटमा पुगीसकेछु पत्तै भएन ।
तराईका फाँटले मन अचेटेर राख्न सकेन । आँखा वरिपरी मुर्कुटा जसरी नाँच्न थाले ‘मकैको घोगामा दुध पस्न नपाउँदै लुछिएका, कतै धानका बाला पाक्न नपाउदै चुँडिएका मैले देख्ने त्यो पहाड अनि तराईको अन्न भण्डारमा जङ्गली उन्मत्त हात्तीहरुको समुहले सोत्तर बनाएका बाली र लथालिङ्ग घरहरु जस्तो, घर पालुवा जनावर पनि हावाको वेगमै उड्लान जस्तोत हावामा उडने चराहरु जमिनमा निदाएका जस्तो लाग्ने दृश्यहरु ।’ म अचम्मित भए यहाँ के भईरहेको छ ?
लामो यत्रा र बेचैनी मनको भयले मेरो आँत हरहर भएको थियो । घाँटी बेस्मारी सुकेको थियो । पानी प्यासले म अझैं धेरै बेचैन थिएँ । म अब यहाँका प्रत्येक घरका ढोका हेर्न लागे । घर बाहिर त पानीका मुहान त्यत्ति देखिदैन् । प्यास र थकानले एक बेगमा समातेर दगुरिरहेका आँखा एक पुरानो घरको बन्द दैलोमा पुगेर अडियो । मैले भित्रैबाट आवाज निकाल्न खोजे । सुख्खा भैसकेको घाँटीबाट ठूलो आवाज निस्कन सकेन । सानो आवाजमा मैले दैलो खोल्न गरेको आग्रह ति भित्ताहरु छेडेर भित्र पस्न सक्यो कि सकेन थाहा छैन । भित्र मान्छे थिए या थिएनन् त्यो पनि थाहा छैन् । तर, बन्द घरको दैलो निक्कैबेरसम्म पनि खुल्दै खुलेन । म अर्को घर तर्फ लागे ।
अर्को घर, जहाँ म रोकिए । दैलो खुल्लै थियो । तर, पानी दिने मान्छे थिएनन् । बाहिरैबाट पानीको घैटो त देखिन्थ्यो । घैटोको पानी बाहिर आएन्, म भित्र जान सकिन । त्यहाँबाट पनि अर्को घर तर्फ लम्किए । बन्द घरको दैलोमा उभिएर एकैछिन् घरकालाई खोजे । ढोका ढक्ढकाए । खुल्दै खुलेन । म लखतरा बनेर त्यहि घरको पिडीमा थचक्क बसे । पिडिबाटै नियाल्न थाले वरिपरीको वातावरण । बाटो उही, बस्ती उही, घर उही, हावा उसैगरी बहिरहेको । तर, न बस्ती बस्ती जस्तो न घर घर जस्तो । न पशुपन्छी र मानिसनै मानिस जस्ता देखिन्थे । यत्तिकेमा घरक्को ढोका घरक्क उघ्रिन्छ मेरा आँखा ढोका तर्फ तानिए । एक मानीसले सासले बोल्दै हातको ईसारामा के चाहियो भनेर प्रश्न गरे । मेरो मुखबाट बोलि निस्किन सकेन । म एक टकले टोलाई रहे । उनको शरीर मानव आकृतिमा सुक्दै गएको थियो । त्रसित र कारुणिक अनुहार आखाहरु बाहिर निस्कन तम्तयार भए जस्ता देखिन्थे । एक मन माया हुडलिएर आयो, अर्को मन डरको भूमरीमा फस्यो । मन शुन्य भयो । बोलि घाँटीमै अड्कियो । म बिस्तारै पछाडी हट्दै गए । त्यो घरको आँगन कतिखेर नाँघिसके पत्तो भएन ।
म हतासमा पाईला अगाडी सार्दै थिए । आँखाले फेरि समाते उस्तै अनौँठो दृष्य । ‘मकैका कलिला घोगा लुच्दै गरेका, राम्रोसँग फल लाग्न नपाउदै बिरुवाहरु चुडीरहेका, अनुहारहरुपनि तेस्तै थिए । जुन घरमा मैले देखे अर्को अनौठो दृश्य यहाँ मानीस हरु एक अर्कामा झगडा गरीरहेका, तानातान लुछालुछ गरिरहेका कोहि कराई रहेका कोहि रोईरहेका । दन्त्य कथामा सुनेको कुनै राक्षसको राज्य जस्तो ।’ मलाई डर लाग्यो यि मान्छेहरुले मलाईनै पो केहि गर्ने हुन् की ?
म झन अत्यासिदै अगाडी बढे । मेरो अर्को स्टेसन झन सुख्खा भेटियो । यहाँ त न लुछ्नका लागि कुनै बिरुवा थिए । न प्यूनका लागि कतै पानी । हावाको बेगसङ्गै देखिने धुलोको मुस्लो मडारिरहेको अलि परको दृष्यमा मेरा आँखा पुगेछन् । त्यहाँको दृष्यले भने मनमा थोरै आशाको त्यान्दो पलायो । म त्यतै दौडिए । त्यहाँ त घरहरु आकाश छुने गतीमा अग्लिरहेका थिए । अन्नतको यात्रा गराउने भान दिने छाती झै फैलिएका र नदि झै तन्किएका यहाँका सडकहरु मैले टेलीभिजनका पर्दा र सामाजिक सन्जालका भित्ताहरुमा देखेकै जस्ता थिए ।तर, अफसोच सफा, सुन्दर र यन्त्र जडित यो ब्यबस्थित सहरले आफैलाई धिक्कार्दै रोहीरहेछ । न गाडीहरु गुडेका छन न कुनै यन्तरले काम गरेकाछन। न पसल खुलेका छन । न सहर सफा छ । गाडी जस्तै लम्पसार छन सडकमा मान्छेहरु । केही मान्छेहरु कुपरिदै र थर्थराउदै हिड्दैछन । मान्छे देखी मान्छे डराएका छन । आखिर के भईरहेछ ? कस्ले यस्तो गरायो ? मैले आज कहिलै नसोचेको सन्सार देखिरहेछु ।
यती बेलासम्म मलाई पानीको प्यास यस्तो लागी सकेको थियो की, ममा आफूलाई उभ्याउने सामर्थ्य बाँकी थिएन । बलैले सहरको एक छेउतर्फ लागे । जहाँबाट समुद्र भेटिने बाटो देखाईरहेथे आफै मेटिन लागेका भित्ताका बोर्डमा झुण्डिएका अक्षरहरु । मनको बेगमा म समुद्र तर्फ लागे । परैबाट देखियो समुद्रका छालहरु । कानमा आएर ठोक्कियो छालले बुकुर्सी मारेका तरंगहरु । आँखा शितल भए । घाँटीको आधा प्यास त यसै मेटियो ।
म समुद्र किनारमा जाँदै थिए । जति समुद्रको नजिक पुग्छु, आँखामा उहि पुराना दृश्यको झल्को दोहोरीन थाले । ठाउँ फरक, मान्छे फरक तर, हाहाकार, तानातान र माछा मार्नेहरुको भागाभाग । म तेसै तेसै शिथिल हुन थालेँ यस्तो बिकसित र सक्षम देशका मानिसको पनि यो अवस्था ? बेला बेलामा पढेका र सुनेका बिभिन्न ग्रन्थहरुको भनाईहरु मेरो मानस पटलमा एकाएक भूमरी जसरी मडारिदै आए । भुईचालो आउँनेछ । कहिले आगोबाट कहिले पानीबाट प्रलय हुनेछ । आकासबाट गन्धक बर्सिने छ । भोकमरी अनिकाल लाग्नेछ । अझ मान्छेले मान्छे खाने दिन आउनेछ । सानैकुरालेनी संसार नष्ट हुने छ । के अहिले तेस्तै हुँदैछ ? के संसारको अन्त्यको दिन आएको हो ? मेरो मनले मलाई धेरै प्रश्नहरु गर्न थाल्यो ( ज्ञान ठुलो कि धर्म ? विबेक ठुलो कि नाम ? प्राण ठुलो कि धन ? सृस्टी ठुलो कि देश ? मनलेनै उत्तर दियो (ज्ञान ठुलो , बिवेक ठुलो, प्राण ठुलो अझ भनौ यो शृष्टि ठुलो ।)
संसार सामान्य हुँदा मात्रै रहेछ मान्छे भन्दा मान्छे ठुलो, देश भन्दा देश ठुलो धन र शक्ति ठुलो हुनेत । मेरो यो यात्रामा संसारकै नाम कमाएका कलाकार, नाम र दामले भरिपुर्ण खेलाडी र संसारनै किनिदिन सक्ने क्षमता भएका ब्यपारिहरुपनि प्राण धान्नका लागि कतिलाई माछा मार्ने भिडमा त कतिलाई खेतबारीमा देखेको छु । आज मलाई लाग्दैछ संसारमा जाति केबल मानब मात्र छन र देश पृथ्वी मात्र छ । जतिनै धन भएपनि धनले खाना किन्न नपाईने दिनपनि आउँदो रहेछ । मान्छे निरिह हुदोरहेछ ।
यहि दृश्यलाई नियाल्दै भिडमा ठेलाम ठेल गर्दै म समुद्र किनारमा पुगे र एक अन्जुली पानी अनुहार तर्फ लेराउदै थिए । दुबै हात बिचमै रोकिए– ‘मेरो मानस पटलमा नाक मुख र आँखामा पहिले हात सफा नगरी छुनु हुदैन भन्ने कोरोनाको त्रास भनौ या सचेतना भनौ घुमीरहेको रहेछ । तर, सुरुको बेगले गर्दा पानीको भाग मेरो अनुहारमा ठोकियो म झसङ्ग भए । ओ गड यो त मेरो सपना रहेछ । मैले त्यो कहाली लाग्दो संसारबाट बाहिर आएर कामना गरे कहिलै मेरो सपना साकार नहोस ।
सृस्टिकर्ताले साँच्चै यो संसार कति सुन्दर बनाएका छन । हावाको तालमा बोट बिरुवा नाँच्छन, चराहरु गाउँछन्, सायद यो देखेर सृस्टि कर्ता खुशी हुन्छन होला । कस्तो राम्रो नियम छ हिमालदेखि सागरसम्मका हरेक जीवजन्तु, प्राणी बनस्पति सबैलाई आफ्नै जीवनको चक्र दिएको छ । यो सबैको गोठालो र समरक्षक सायद मान्छेलाई बनाएका हुनुपर्छ । नत्र किन मान्छे सबै भन्दा उच्च हुन्थ्यो र ? तर, मान्छेले न गोठालोको काम गरे न समरक्षकको केवल आफ्नो शक्ति र आफ्नै लागि प्रकृतिको नियम पिपरितका कयौं घातक काम गरे ।
अरुलाइ नराम्रो गर्नको लागि पृथ्वीको गति रोक्न सक्थे भने अरु देशलाई बर्साै अन्धकारमा राखेर आफु घाम लाग्दामानै झ्याल ढोका थुनेर सुत्थे होला । देशको सिमाना हामीले बनायौ तर, पृथ्वी अरुकसैले बनाएको हो । यसलाई थिलथिलो वनाउँन हुँदैन भन्ने मान्छेले कहिलै सोचेन । हामीले नियम मिच्नेलाई दण्ड दिए झै प्रकृतिको नियम बिपरित हामीले काम गरेको सजाय हामीले भोगीरहेका त छैनौ ? म आफु आजैबाट मान्छे भएर ज्यूने छु भन्ने चेत आएको छ । अब हामी सबै मान्छे हुन जरुरी छ । देश, जाति, धर्मभन्दा माथि उठेर सबैको राम्रो राम्रो पक्षलाई अंगाल्दै नराम्रो पक्षलाई निरुत्साही गर्दै जीवन जीउन जरुरी छ । अवपनि हामीले आफुलाई सच्याउन सक्दैनौ भने अहिलेको यो महामारीबाट बचे पनि हाम्रो अस्तित्व अव आउने धेरै महामारीले समाप्त गर्ने छ ।
Previous Previous post: कोरोना संक्रमण : भारतमा एकैदिन १६ जनाको मृत्यु
Next Next post: पृथ्वी शान्त, घरभित्र हिंसा : लकडाउनले बढायो संसारभरी महिला हिंसा